हामीलाई | सम्पर्क गर्नुहोस् पेनी: पेन्सिल्भेनियालीहरूलाई स्वास्थ्य कवरेजसित जोड्ने
पेन्नीसँग जडान गर्नुहोस्™
चाहे तपाईं स्वास्थ्य बिमाको लागि पहिलो चोटि किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ वा झ्याल किनमेल मात्र गर्दै हुनुहुन्छ, पेनीले तपाईंलाई आफ्नो स्वास्थ्य सेवाको लागि सही योजना बनाउन मदत गर्न सक्छ। तपाईंको प्रश् नको जवाफ छ ।
के कुनै प्रश् न छ? अलिकति अत्तालिएको महसुस गर्नुहुन्छ ? हामी पनि त्यहाँ थियौं – त्यसैले हामीले केही मद्दत वा मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने विभिन्न तरिकाहरू तय गरेका छौं।
यदि तपाईं ग्राहक हुनुहुन्छ र पेनीको मैत्रीपूर्ण र अनुभवी ग्राहक सेवा प्रतिनिधिहरु मध्ये एकसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हामीलाई 1-844-844-8040 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं एक Pennie-प्रमाणित दलाल वा Assister हुनुहुन्छ र तपाईं सहायता आवश्यक छ भने तपाईं 1-844-844-4440 मा पेनी कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
Nov 1st - जेठ १५ गते
मन – फ्रा | 8:00am – 7:00PM EST
| 8:00am – 1:00PM EST
TTY समर्थन: एक दुभाषसँग जोडिने ७११ दूरसञ्चार रिले सेवा डायल गर्नुहोस् जसले त्यसपछि तपाईंलाई पेनी कलसेन्टरसँग जोड्नेछ।
कल सेन्टर छुट्टी बन्द:
नयाँ वर्ष दिन मार्टिन लुथर किङ्ग डे
राष्ट्रपति दिवस स्मृति दिवस
जूनतेह्रौं दिन स्वतन्त्रता दिवस
मजदुर दिवस आदिवासी जनसम्पर्क दिवस
पशुपति दिवस धन्यवाद
क्रिसमस को पूर्वसन्ध्या (3 बजे बन्द) क्रिसमस दिवस
नयाँ बर्षको पूर्वसन्ध्या (साँझ ५ बजे बन्द)
कृपया सामान्य सोधपुछका लागि मात्र यो फारम प्रयोग गर्नुहोस् । संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी नपठाउनुहोस्। जस्तै: खाता वा सामाजिक सुरक्षा नम्बर।
विषय चयन गर्नुहोस्म प्रश्न भएको ग्राहक हुँम प्रश्न भएको दलाल हुँम एउटा प्रश्नको साथी वा सहयोगी हुँ
कृपया तपाईँको NPN वा PA लाइसेन्स नम्बर प्रविष्टगर्नुहोस् *
पेनी भनेको के हो?
अमेरिकी उद्धार अधिनियमले मैले स्वास्थ्य बिमाको लागि तिर्ने रकम कसरी परिवर्तन गर्छ?
मलाई भर्ना गर्न कसले मदत गर्न सक्छ?
आर्थिक सहयोग बारे र योग्य छु भने म कहाँबाट अझ बढी सिक्न सक्छु?
पेनी गुणस्तरीय स्वास्थ्य बिमा योजनाको लागि किनमेल गर्न र योग्य भएमा वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न पेन्नी पेन्सिलभेनियाको आधिकारिक गन्तव्य हो। यसबारे यसरी सोच्नुहोस्: यदि स्वास्थ्य र दन्त चिकित्सा बिमा नै किराना हो भने पेनी नै किराना पसल हो।
हालै पारित अमेरिकी उद्धार योजना अधिनियममा पेन्सिलभेनियाका मानिसहरूले कवरेजको लागि किनमेल गर्न र पेनीमार्फत भर्ना भइसकेकाहरूको लागि थप बचत गर्ने अद्यावधिकहरू समावेश छन्।
तपाईंलाई स्वास्थ्य बिमा योजनामा भर्ना हुन मदत गर्ने थुप्रै विकल्पहरू छन्। यदि आफैले भर्ना प्रक्रिया पूरा गरेमा, हाम्रो Pennie ग्राहक सेवा टोली कुनै पनि बिन्दुमा मद्दत गर्न तयार हुनेछ। किनमेल गर्ने समय भएपछि, यदि तपाईँ थप सहयोग चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले पेनी अस्सिस्टर वा पेनी-प्रमाणित ब्रोकरबीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको आम्दानी र घरको साइजको आधारमा तपाईं आर्थिक सहयोगको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईंको मासिक प्रीमियम वा खल्ती बाहिरको खर्च कम हुन्छ। आर्थिक सहयोग को हाम्रो पृष्ठ हेर्नुहोस्।
स्वास्थ्य बिमाको लागि म कहिले किनमेल गर्न सक्छु?
अमेरिकन रेस्क्यु एक्ट पारित गर्दा हुने अपडेटका कारण, तपाईं जून ३० सम्म स्वास्थ्य कवरेजका लागि किनमेल गर्न र भर्ना हुन सक्नुहुन्छ।
पेनीको खुल्ला भर्ना नोभेम्बर १ देखि जनवरी १५ सम्म रहेको छ । यस अवधिमा पेन्सिलभेनियामा कानुनी तवरमा बस्ने जोसुकैले पनि पेनी मार्फत स्वास्थ्य बिमाको लागि आवेदन दिन सक्छन्।
जीवनका योग्य व्यक्तिहरू वर्षको जुनसुकै समयमा पनि भर्ना हुन सक्छन्।